Ngabe usebenza nezinhlangano ezihluzayo? | Martech Zone
Ngabe usebenza nezinhlangano ezihluzayo?
NgoLwesithathu, Novemba 15, 2006 NgoLwesibili, Novemba 21, 2017 Douglas Karr
Namuhla ngijoyine ikomidi lenkampani yenkampani esiza abantulayo, i-ExactIMPACT. Angihlali nginethuba noma izinsizakusebenza zokubuyisa ngakho nginqume ukuthi kufanele ngenze umsebenzi othile wokupha lapho ngichitha isikhathi esiningi khona! Le Thanksgiving ibukeka imfiliba kakhulu ezinhlanganweni ezisiza umphakathi ezibuka abaningi emphakathini wethu abangakwazi ukuzinakekela. Leso isitatimende esidabukisayo esinikezwe amandla omnotho wethu. Esinye isibalo okufanele sisikhumbule ukuthi lapho abantu belinganisa ukungasebenzi, empeleni babala nje abantu abasebenzisa izimali zokungasebenzi. Baningi abantu abangasebenzi futhi abafuna imisebenzi abangayitholi.
Kunoma ikuphi ukukhula komnotho, yizinkampani ezichuma ngempela. Uma ungazange ube nethuba lokuyibuka, ngincoma Inhlangano. Ibhayisikobho iyadonsa izintambo 'ezingakwesokunxele', kodwa ngiyasithanda isimo esivamile se-movie… okuwukuthi 'izinkampani' azikho omunye umsebenzi ngaphandle kokwenza inzuzo. Lowo ukuphela kwempahla isitokwe esinayo esitokweni.
Ngenxa yalokhu, izinkampani eziningi zibeka phambili ukubamba iqhaza ezinhlanganweni zosizo nakwezinye izenzo zokuphana. Kuyishwa impela lokho. Kepha izinkampani eziningi ZENZA, futhi awuzwa ngazo kaningi. UScott Dorsey, isikhulu esiphezulu se- I-ExactTarget, ukhulume namhlanje ngeSalesforce nokuthi bangamandla amakhulu kanjani okusiza umphakathi. Angikaze ngazi! Ngithole i-athikili yakamuva ekhuluma nayo:
UBenioff uqinisekise ukuthi inkampani yamukela imodeli yokunikela nge-1% yokulingana, i-1% yenzuzo kanye ne-1% yesikhathi sabasebenzi zisuka nje. I-IPO yakwaSalesforce.comâ ehlobo lika-2004 iguqule khona manjalo ukuthi u-1% wemali waba isisekelo sezimpahla ezingama- $ 12 million, waguqula isisekelo saba yinhlangano enkulu ngobusuku obubodwa. Kodwa ukunikelwa kwesikhathi sabasebenzi kuyisici esibaluleke kunazo zonke kulolu hlelo kumbono weBenioffâ? Ngoba kuqinisekisa ukuthi yonke inkampani ibamba iqhaza ohlelweni lokusiza, oluthinta kakhulu isiko lenkampani.
UScott uphonsela inselelo ikomidi lethu ukuthi lihlele imizamo yethu yokusiza abantu ukuba ilinganiswe ne-Salesforce. Leyo yinselelo enhle kabi! Umsebenzi onjalo uyajabulisa impela. Ngiyajabula ukuba yingxenye yekomidi nengxenye yenkampani. Uma ukholwa ukuthi izinkampani kufanele zenze okuningi, mhlawumbe kufanele uqale ukubuza abathengisi bakho ukuthi babuyisela kanjani emphakathini. Ukube bekunengcindezi eyengeziwe yokuthi izinkampani zenze okuningi, bebengeke bathole impumelelo abayifisayo ngaphandle kokupha. Enye yezinhlangano esibheke ukusiza yi-Wheeler Mission:
Izibalo ze Wheeler Mission, e-Indianapolis:
Kunabantu abangafika kwabangu-15,000 abangenawo amakhaya edolobheni lethu minyaka yonke
Inani lendawo yokuhlala linikeziwe: 5,960
Ingqikithi yenani lokudla okuphakelwe: 19,133
Ingqikithi yezikhwama zokudla ezisatshalalisiwe: 434
Abesilisa abangama-68 babekhona ohlelweni lwethu lwe- “Izidingo Ezikhethekile”: lokho kunanini ngaphambili kulolo hlelo
Kwothi elifanayo, Umsebenzi we Wheeler lapha edolobheni uludinga kakhulu usizo lwakho kulo nyaka. Uma ukwazi, shiya okunye ukudla: iTurkey, i-Homemade Macaroni kanye noshizi, ukugxusha, ubhontshisi obuluhlaza, isaladi eluhlaza, isoso esisha se-Cranberry, ama-Dinner Rolls, i-Apple Cider, amakhekhe nama-pie Unganikela futhi nge-inthanethi! Abakwa Wheeler bafuna amavolontiya ayi-100 azosiza nge-Drumstick Dash, okuyisikhwama sabo esikhulu sonyaka.
Tags: benioffngqoimpactngqosalesforcei-scorr dorseyinhlanganoukuthunywa kwesondo